Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Meprobamate ကို စိုးရိမ်စိတ်နှင့် စိတ်ဂဏာမငြိမ်ခြင်းတို့အား ရေတိုကုသရာတွင်အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။ ၎င်းသည် ဦးနှောက်မှ တစ်ချို့သောစင်တာများပေါ်တွင် အာနိသင်ပြုပြီး အာရုံကြောစနစ်ကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။
Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို အစာနှင့်တွဲပြီးသောက်နိုင်သလို အစာမပါပဲလည်းသောက်နိုင်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ၂-၄ ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း သောက်ရပါမည်။
ဆေးပမာဏမှာ အသက်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ကုသမှုအားတုန့်ပြန်မှုတို့ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ၂၄ နာရီအတွင် ၂၄၀၀ မီလီဂရမ်ထက်ပိုပြီး မသောက်သင့်ပါ။
ညွှန်ထားသောပမာဏထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ အချိန်တိုး၍ဖြစ်စေ မသုံးပါနှင့်။ အခြေအနေမှာ မြန်မြန်သက်သာမလာပဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါသည်။ ဆေးကို အချိန်အကြာကြီး မှန်မှန်သောက်လျှင် သို့မဟုတ် ပမာဏအများကြီး သောက်လျှင် ဆေးကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါက ဆေးဖြတ်သည့်လက္ခဏာများ (ဥပမာ အန်ခြင်း၊ တုန်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ တက်ခြင်း) ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်သည် ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့ပေးပါလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို မေးပါ။ ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများ ပေါ်လာပါကလည်း ချက်ချင်းပြောပါ။ ဆေးကို အချိန်အကြာကြီးသုံးသည့်အခါ ဆေးအာနိသင် မပြပဲရှိတတ်ပါသည်။ ဆရာဝန်မှ ဆေးပမာဏတိုးပေးခြင်း ဆေးပြောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးမှအာနိသင်မပြတော့လျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
လူအများအတွက်အကျိုးရှိသော်လည်း ဆေးသည် စွဲတတ်သောသဘောရှိသည်။ ဆေးစွဲသည့်အခြေအနေများရှိလျှင် (မူးယစ်ဆေး သို့မဟုတ် အရက်စွဲခြင်းများ) ဒီအခြေအနေမှာ ပိုဆိုးနိုင်ပါသည်။ ဆေးစွဲနိုင်ချေကိုလျော့ချနိုင်ရန် ဆေးကိုညွှန်ထားသည့်အတိုင်း အတိအကျသုံးပါ။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမေးပါ။ ရောဂါအခြေအနေ ပျောက်မသွားလျှင်၊ ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Meprobamate ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Meprobamate ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Meprobamate ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Meprobamate အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Meprobamateကိုမသုံးခင် ဤဆေးနှင့်ရော တခြား chlorambucilနှင့်ရော ဓါတ်မတည့်မှု ရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများ ပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အား ပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် တစ်ချို့သော အသည်း၊ သွေးရောဂါများ (porphyria)၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ဦးနှောက်ရောဂါများ (တက်ခြင်း၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်မိခြင်း)၊ စွဲသည့်ပြဿနာများ မိသားစုတွင် သို့မဟုတ် မိမိတွင် ရှိနေလျှင် (ဥပမာ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း)။
ဤဆေးသည် ခေါင်းမူးစေတတ်၏။ ဆေးမှ မိမိအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ကောင်းကောင်းမသိရသေးမချင်း ကား၊ စက်မောင်းခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ အရက်ပါသည့် အချိုရည်များကိုရှောင်ပါ။
အသက်ကြီးသူများတွင် ဤဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပိုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ငိုက်မျဉ်းခြင်းနှင့် စွဲခြင်း။ ငိုက်မျဉ်းခြင်းက ချောလဲပြုတ်ကျခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
မမွေးသေးသောကလေးကိုထိခိုက်နိုင်သဖြင့် ဤဆေးကို ကိုယ်ဝန် ပထမ ၃ လတွင် မသုံးရပါ။ နောက်ပိုင် ၆ လတွင် ဆေးကို အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုရမည်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။
ဆေးသည် နို့ရည်ထဲသို့ဖြတ်နိုင်၏။ ထို့ကြောင့် နို့စို့ကလေးတွင် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ နို့မတိုက်ခင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် N ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မပျောက်သွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။
ဤဆေးကို ဆရာဝန်မှပေးခြင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထက် အကျိုးကျေးဇူးက ပိုများသောကြောင့် ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိထားပါ။ လူအများစုတွင် ဤဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်ကြပါ။
အောက်ပါဖြစ်လေ့မရှိသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာပါကဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းပြောပါ။ နှလုံးုန်ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း/မြန်ခြင်း၊ မူးလဲခြင်း၊ ပိုးဝင်သည့်လက္ခဏာများ (ဖျားခြင်း၊ လည်းချောင် ခဏခဏနာခြင်း)၊ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ အညိုအမည်းစွဲလွယ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်လက္ခဏာများ (ဆီးပမာဏပြောင်းသွားခြင်း)၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ မောပန်းနေခြင်း။
ဤဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သည့်ဓါတ်မတည့်ဖြစ်ခြင်းမှာ ရှား၏။ သို့သော် အောက်ပါပြင်းထန်ဓါတ်မတည့် လက္ခဏာများဖြစ်လာပါက အရေးပေါ်ကုသမှုများ ခံယူရပါမည် – အကွက်ထခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ရောင်ခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာ၊ လည်ချောင်း)၊ ခေါင်းတအားမူးခြင်းနှင့် အသက်ရှူရခက်ခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ငိုက်မျဉ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည့် တခြားဆေးကုန်များဖြစ်သော အရက်၊ ဆေးခြောက်၊ Antihistamine (cetirizine, diphenhydramine)၊ အိပ်ဆေးများ စိုးရိမ်စိတ်ကျဆေးများ (alprazolam, diazepam, zolpidem)၊ ကြွက်သားပြေလျော့ဆေးများ (carisoprodol)၊ နာကိုတစ်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (codeine) များသုံးနေပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုပြောပါ။
သင်သုံးသမျှဆေးတိုင်းအတွက် အညွှန်းစာကို သေချာဖတ်ပါ၊ (အလက်ဂျီ သို့မဟုတ် အအေးမိချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့တွင် ငိုက်မျဉ်းစေတတ်သည့်ဆေးများ ပါနေတတ်ပါသည်။ ထိုဆေးကုန်များကိုစိတ်ချစွာသုံးနိုင်ရန်အတွက် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမေးပါ။
Meprobamate သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Meprobamate က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Meprobamate သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
1200 to 1600 mg ကို တစ်ရက်လျှင် ၃-၄ ကြိမ် ခွဲသောက်ရမည်။
အများဆုံးပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 2400 mg
– ငိုက်မျဉ်းမှုကိုထိန်းရန် အာနိသင်ပြသော အနည်းဆုံးပမာဏကိုသာသုံးသင့်သည်။
– ၄ လအထက်ကြာပါက ဆေးအာနိသင်ပြမပြ မသိရတော့ပါ။
Uses: စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါကုသရန် သို့မဟုတ် စိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာများကိုသက်သာရန် ရေတိုပေးခြင်း
အသက်ကြီးသူများ: သတိနှင့်သုံးပါ။ ဆေးပမာဏ၏ အနည်းဆုံးသုံးနိုင်သည့်အချိန်အဆမှ စသုံးရပါမည်။
ရုတ်တရတ်ဆေးရပ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ဆေးကို ၁-၂ ပတ်ကြာအောင်ဆွဲပြီး တဖြည်းဖြည်းလျှော့ပေးပါ။ အစားထိုးအနေနှင့် အာနိသင်ကြာရှည်ပြသော ဘာဘီကျူရိတ်များကိုပေးပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်ရမည်။
– တစ်ရက်လျှင် ၃-၄ ကြိမ်သောက်ရန်။
– ဆေးမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ရောစွဲတတ်သောကြောင့် ဆေးပမာဏနှင့်အချိုးအစားကို သတိပြုပြီးပေးရမည်။
– ရုတ်တရတ်ရပ်ပစ်ခြင်း အထူးသဖြင့် အချိန်အကြာကြီးသုံးပြီးမှ ရပ်ခြင်းမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ ဆေးဖြတ်သည့်လက္ခဏာများမှာ ဆေးရပ်ပြီး ၁၂-၄၈ နာရီအတွင်း ပေါ်လာပြီး နောက် ၁၂-၄၈ အတွင်း ပျောက်သွားတတ်သည်။
– နောက်ထပ်လိုအပ်၍ပေးရပါက မှန်မှန်စစ်ဆေးပေးရမည်။
– အလွန်အကျူးငိုက်မျဉ်းခြင်းအား စောင့်ကြည့်ပါ။
– ဆေးအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ပါ။
– ဤဆေးသောက်ထားလျှင် ကားမောင်းခြင်းကဲ့သို့ အန္တရာယ်များသည့်အလုပ်များကို မလုပ်သင့်ကြောင်း လူနာကိုသတိပေးရမည်။
– သတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက် ပိုသုံးပါက ကိုယ်ရောစိတ်ရောစွဲသွားတတ်ကြောင်း လူနာကိုသတိပေးရမည်။ ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများ ပေါ်လာတတ်ပြီး ဆေးဖြတ်ပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောထားပါ။
– အရက်နှင့် တခြားအာရုံကြောစနစ်ကိုဖိသည့်ဆေးများ ခံနိုင်ရည်ပျောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လူနာများကို အသိပေးရမည်။ ဆေးသောက်နေစဉ် ထိုအရာများကို မသုံးစွဲရပါ။ ဆရာဝန်နှင့်သေချာဆွေးနွေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်: ၆-၁၂ နှစ်
တစ်ရက်လျှင် 200 to 600 mg ကို ၂-၃ ကြိမ် ခွဲသောက်ရန်။
အသက်: ၁၃ နှစ်နှင့်အထက်
တစ်ရက်လျှင် 1200 to 1600 mg ကို ၃-၄ ကြိမ် ခွဲသောက်ရမည်။
ကလေးလူနာများ၌ အချိုးအစားဘယ်လောက်ပေးရမည်ဆိုခြင်းကို အတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Meprobamate (မီဖရိုဘမိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Meprobamate ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Meprobamate ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Meprobamate Dosage. https://www.drugs.com/dosage/meprobamate.html. Accessed March 15, 2018.
Meprobamate. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8187/meprobamate-oral/details. Accessed March 15, 2018.
ခွေးရူးပြန် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးချင်နေလောက်မယ့် မေးခွန်းအချို့